Zvakazarurwa 9 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku raZvakazarurwa 9:1-21
Bhosvo rechishanu (1-11)
Dambudziko rimwe chete rapfuura, mamwe maviri ari kuuya (12)
Bhosvo rechitanhatu (13-21)
9 Ngirozi yechishanu yakaridza bhosvo rayo.+ Ndakabva ndaona nyeredzi yakanga yadonha kubva kudenga ikawira panyika, uye yakapiwa kiyi yemuromo wegomba rakadzikadzika.+ 2 Yakavhura muromo wegomba rakadzikadzika, utsi hukabuda mugomba huchikwira seutsi huri kubva pachoto chakakura, uye zuva nemhepo zvakasvibiswa+ neutsi hwegomba racho. 3 Muutsi hwacho makabuda mhashu dzichienda panyika,+ uye dzakapiwa simba rakafanana neremarize ari panyika. 4 Dzakaudzwa kuti dzisakuvadza zvinomera zvepanyika kana uswa hwakasvibirira kana miti, asi vanhu vaya chete vasina chisimbiso* chaMwari pahuma dzavo.+ 5 Mhashu dzacho dzakanzi dzisavauraya, asi dzivarwadzise kwemwedzi mishanu, uye kurwadziwa kwavo* kwakanga kwakaita sekwekurumwa nerize.+ 6 Mumazuva iwayo vanhu vachatsvaga rufu asi vacharushaya, uye vachatoti dai vafa zvavo asi rufu ruchavatiza. 7 Mhashu dzacho dzakanga dzakafanana nemabhiza akagadzirira kuenda kuhondo;+ misoro yadzo yakanga iine dzaiita sekorona dzegoridhe, uye zviso zvadzo zvakanga zvakaita sezvevanhu, 8 asi dzaiva nebvudzi rakaita serevanhukadzi. Mazino adzo akanga akaita seeshumba,+ 9 uye dzakanga dziine zvinhu zvinovharidzira chipfuva zvakafanana nezviya zvinogadzirwa nesimbi. Mapapiro adzo aitinhira sengoro dzemabhiza dziri kumhanyira kuhondo.+ 10 Mhashu dzacho dzaiva nemiswe inoruma semarize, uye mumiswe yadzo ndimo mune simba rekukuvadza vanhu kwemwedzi mishanu.+ 11 Dzina mambo wadzo, iyo ngirozi yegomba rakadzikadzika.+ MuchiHebheru anonzi Abhadhoni,* asi muchiGiriki anonzi Aporiyoni.* 12 Dambudziko rimwe chete rapfuura. Asi pane mamwe maviri+ ari kuuya pashure pezvinhu izvi. 13 Ngirozi yechitanhatu+ yakaridza bhosvo rayo.+ Uye ndakanzwa inzwi richibva panyanga dzeatari yegoridhe+ iri pamberi paMwari, 14 richiti kungirozi yechitanhatu, yakanga iine bhosvo: “Sunungura ngirozi ina dzakasungwa kurwizi rukuru rwaYufratesi.”+ 15 Ngirozi dzacho ina idzo dzainge dzakagadzirira kusvika kwenguva yacho nezuva nemwedzi negore dzakabva dzasunungurwa kuti dziuraye chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvevanhu. 16 Mauto anotasva mabhiza aisvika makumi maviri ezviuru akapetwa nezviuru gumi;* ndakanzwa kuwanda kwawo. 17 Izvi ndizvo zvakanga zvakaita mabhiza andakaona muchiratidzo, nevaya vakanga vakaatasva: Zvinovharidzira zvipfuva zvavo zvaiva zveruvara rwakatsvuka semoto nerwebhuruu,* neyero yakaita sesarufa; misoro yemabhiza acho yakanga yakaita semisoro yeshumba,+ uye mumiromo yawo maibuda moto neutsi nesarufa. 18 Chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvevanhu chakaurayiwa nematambudziko matatu aya anoti moto neutsi nesarufa izvo zvakabuda mumiromo yawo. 19 Nekuti simba remabhiza acho riri mumiromo yawo nemumiswe yawo, nekuti miswe yawo yakaita senyoka uye ine misoro, uye anokuvadza nemiswe yacho. 20 Asi vamwe vanhu vese vasina kuurayiwa nematambudziko iwaya havana kusiya mabasa emaoko avo; havana kurega kunamata madhimoni nezvidhori zvegoridhe nezvesirivha nezvemhangura nezvematombo nezvematanda, zvisingaoni kana kunzwa kana kufamba.+ 21 Uye havana kusiya umhondi hwavo kana zvemidzimu zvavaiita kana upombwe* hwavo kana umbavha hwavo.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kurwadzisa kwadzo.”
^ Kureva kuti “Kuparadza.”
^ Kureva kuti “Muparadzi.”
^ Kana kuti “20 000 x 10 000.” Kureva, 200 000 000.
^ Kana kuti “nerwebhuruu sehiyasindi.”